အပေါ် Posted 01 / 27 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် testosterone Enanthate. ဒါဟာရှိပါတယ် 12 မှတ်ချက်.
9188 Views စာ
ရော်နယ်အောင်နိုင် J ကို Rapacciuolo10 မှာ 23 / 2018 / 12: 33 ညနေ
စမ်းသပ်မှုအီး၏ 100 ဂရမ်နှင့် Deca ၏ 100 ဂရမ်ဝယ်ယူချင်ပိုက်ဆံဂရမ်ပေးပို့ဖို့ခဲ့ကြသည်အပေါ်စျေးနှုန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအမိန့်။
ယောဟနျသ Kramer10 မှာ 22 / 2018 / 9: 11 ညနေ
အချို့သောစမ်းသပ်ခြင်း, E, စမ်းသပ်ခြင်းကို C နှင့်အချို့သော Deca ဝယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စား။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေလုံခြုံပြီး legit များမှာကြားဖူးတယ်။ နောက်ကျောငါ့ကိုရပေးပါ။
ဂျယ်ရမီ Butler10 မှာ 22 / 2018 / 4: 29 ညနေ
100 ဂရမ် te အမှုန့်ဝယ်ယူချင်တယ်။ ထွက်အလုပ်လုပ်မှနယူး။ ပူးတွဲလုပ်သားအဖြစ်ဤအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။
Dave09 မှာ 14 / 2018 / 7: 36 ညနေ
ဘယ်လောက် 500mg စမ်းသပ် E ကိုအမှုန့်နှင့်အဘယ်သို့ငါဝယ်ယူရန်ပါဘူး
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က09 မှာ 02 / 2018 / 8: 59 ညနေ
ခရစ္စတိုဖာ09 မှာ 01 / 2018 / 5: 37 ညနေ
စမ်းသပ်မှုအီး၏ 100 ဂရမ်နှင့် Deca ၏ 100 ဂရမ်ဝယ်ယူချင်ပိုက်ဆံဂရမ်ပေးပို့ဖို့ခဲ့ကြသည်အပေါ်စျေးနှုန်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရန်လိုအပ်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က08 မှာ 01 / 2018 / 9: 56 ညနေ
OK ကို, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထိတွေ့ရလိမ့်မယ်
ရောဘတ် Buchel08 မှာ 01 / 2018 / 2: 13 ညနေ
ဟိုင်း။ testosterone Enanthate ၏ 100 ဂရမ်ငါ့ကိုဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ? နှင့်မည်မျှအဆိုပါနယ်သာလန်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်တင်ပို့နေကြသနည်း
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က07 မှာ 10 / 2018 / 8: 50 ညနေ
OK ကို, ငါသည်သင်တို့၏စာတိုက်ပုံးကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
Haitham တစ်ဦးက07 မှာ 10 / 2018 / 12: 53 ညနေ
အဘယ်အရာကိုအွန်, ကနေဒါမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏စမ်းသပ်ခြင်း Enanthate ၏ 25 ဂရမ်ဝယ်ယူ၏ကုန်ကျစရိတ်, ပါလိမ့်မယ်
အက်ဒွပ် Corlett06 မှာ 24 / 2018 / 5: 55 ညနေ
Homer Simpson04 မှာ 05 / 2018 / 8: 14 ညနေ
ကနေ testosterone propionate အမှုန့်ဖို့အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်	ကိုယ်အလေးချိန်-တစ်ဦးကိုသင်သိသင့်အံ့သြဖွယ်အဆီဆုံးရှုံးမှုမူးယစ်ဆေးများအတွက်သဘာဝအရင်းအမြစ် Orlistat အမှုန့် !!!